Ingabe isenjeni yini iSundowns | News24
Ingabe isenjeni yini iSundowns
ABADLALI, izikhulu kanye nabaqeqeshi boshampeni abadla umhlanganiso kwi-Absa Premiership ngesizini edlule iMamelodi Sundowns nekumanje idlala kwi Caf Championship bathi bona bazofinyelela emzuliswaneni wokugcina kulomqhudelwano.
Abathandi bebhola baseMzansi bake bathi ukushaqeka ngempelasonto edlule ngesikhathi leliqembu lezinjinga zasePitoli lidliwa yiZesco United ekuhambeni eZambia ngo 2-1.
Umqeqeshi weSundowns uPitso Mosimane uthi ezakhe zavelelwa umshophi ngesikhathi zidliwa ekuhambeni futhi noma ubani wabona ukuthi ezakhe zazilihlikihla kuthule umoya. “Kwakuyibhadana nje elingasho lutho. Thina sadlala kahle noma-ke singabanga nenhlanhla yokushaya amagoli.
Ngiyavuma ukuthi kukhona amathuba ambalwa esawageja, kodwa phela akupheli ngathi.
Okusalele thina nje wukuthi sibashaye njempela uma sesidlala nabo ekhaya,”kusho uMosimane.
Phela ezika Mosimane ezidla izambane likapondo zizobhekana nezitha zazo zaseZambia emlenzeni wesibili ngoMgqibelo eLucas Moripe Stadium.
UMosimane uthi lonke iqembu laphoxeka ngokuhlulwa ngo 2-1 kodwa kwaba kuhle ngoba nabo bakwazi ukufaka igoli elilodwa.
Uma kuhambe kahle ePitoli iSundowns kofanele iwine ngegoli elilodwa nje vo, kodwa izihambi zingashayi lutho.
Omunye wamafolosi eSundowns u-Anthony Laffor uthi izivakashi zizobe zihambe kabi ngoba ezakhe zizobe zidla lubi. “Ekhaya sizobe sithelwe ngezibonkolo, futhi sifuna ukubashayisisa.”
Kanti eziqhamuka ePitoli esitebeleni seSundowns ukuthi abadlali bathenjiswe itshe lemali uma nje bengase badle umhlanganiso kweye-Caf Champions League.